LibreOffice 6.4 waa lasii daayay wuxuuna ku faanaa waxqabad wanaagsan iyo inbadan | Laga soo bilaabo Linux
LibreOffice 6.4 durba waa lasii daayay wuxuuna ku faanaa waxqabad wanaagsan iyo inbadan
Shalay Aasaaska Dukumintiga wuxuu ku dhawaaqay helitaanka guud ee nooca 6.4 qaybta furan ee xafiiska LibreOffice, tani waa nooc muhiim ah, maxaa yeelay marka laga reebo noqoshada nooc guud, tani waxay mataleysaa tan ugu dambeysa laanta 6.x. Nooca xiga ee LibreOffice ee la sii dayn doono dabayaaqada sanadkan wuxuu noqon doonaa LibreOffice 7, sannadkan sidoo kale wuxuu xusayaa XNUMX-guuradii ka soo wareegtay markii la bilaabay LibreOffice.
Qeybtan cusub ee ah qaybta furan ee furan ee furan, waxaa lagu xusay in shaqooyin cusub ay ku jiraan sidoo kale waxay keeneysaa sixitaanno badan iyo horumarin.
1 Maxaa ku cusub LibreOffice 6.4
1.1 Sidee loo rakibaa LibreOffice 6.4 Debian, Ubuntu iyo derivatives?
1.2 Sidee loo rakibaa LibreOffice 6.4 Fedora, CentOS, openSUSE iyo derivatives?
1.3 Sidee loo rakibaa LibreOffice 6.4 Arch Linux, Manjaro iyo derivatives?
Maxaa ku cusub LibreOffice 6.4
Laga bilaabo hagaajinta cusub ee LibreOffice 6.4, horumariyeyaashu waxay u maleynayaan in noocaani cusub uu dhakhso u bilaabmayo iyo nidaamka caawinta arjiga ayaa hada la hagaajiyay si loo helo helitaanka macluumaadka mid sahlan oo dhaqso ah iyadoo la siinayo natiijooyin sax ah iyo shaashad shaashad ah.
Sidoo kale, nooca cusub ee 'LibreOffice 6.4' ayaa lagu sameeyay horumar ballaaran Marka loo barbardhigo nuqulkeedii hore, LibreOffice 6.3, oo la sii daayay Noofembar 2019.
Hagaag, lixda codsi ee kujira suugaanta: Qoraa, Calc, Impress, Draw, Math iyo Base waxay leeyihiin astaamo cusub oo khuseeya si loo dardar galiyo wax soosaarka isticmaalaha.
Qeyb ahaan Qoraa wuxuu soo bandhigayaa shax cusub «Shaxan» dhinaca dhinaceeda waxayna hagaajineysaa nuqullada iyo dhalooyinka miisaska, marka lagu daro inay jiraan ikhtiyaar menu cusub loo yaqaan "Paste Special" kaas oo kuu ogolaanaya inaad nuqul ka sameysatid oo aad ku dhejisid miis qaab miis ah oo buul ku yaal.
Faallooyinka hadda waxaa loo calaamadin karaa sida la xalliyey oo lagu daro sawirrada iyo sawirada dukumiintiyada qoraalka ah
Wixii loo yaqaan 'Calc', 'xaashiyaha' ayaa hadda loo dhoofin karaa iyada oo ah hal dukumiinti oo PDF ah. Isla mar ahaantaana, codsiyada Aragti iyo Sawir ayaa kudaray ikhtiyaar cusub "qoraalka iskujira" ilaa Qaabka menu-ka si loogu daro sanduuqyo badan oo qoraal ah oo loo dhigo hal.
Isticmaalayaasha 'LibreOffice Online' Waxay sidoo kale ka faa'iideysan doonaan horumarinnada kale ee muhiimka ah ee Qorayaasha iyo Calc.
Xaqiiqdii, Qoraa wuxuu hirgeliyaa isla miisaska miiska dhinaceeda waxayna u fidisaa dadka isticmaala maareyn dhameystiran shaxda dukumiintiga.
Isla mar ahaantaana, dadka isticmaala Calc waxay ka faa'iideysan karaan saaxir muuqaal dhammaystiran leh waxayna marin u heli karaan fursado ballaaran oo ballaaran oo loogu talagalay jaantusyada qaarkood ee ku yaal bogagga faafinta.
Hay'adda Document Foundation ayaa sidoo kale liis garaysay astaamo kale oo aad ugu habboon oo lagu soo bandhigay nooca cusub ee xafiiska xafiiska.
Sidoo kale, Xarunta bilawga LibreOffice sidoo kale waa la hagaajiyay. Hadda waxaa jira astaamo codsi oo ku xiga dukumiintiyada yar yar si ay uga caawiyaan dadka isticmaala inay kala soocaan noocyada dukumintiga.
Sidoo kale, LibreOffice 6.4 sidoo kale waxay soo saartay matoor cusub oo QR ah taas oo u oggolaanaysa dadka isticmaala inay ku dari karaan lambarrada mobilada dukumiintigooda. Ugu dambeyntiina, waxaa jira muuqaal auto-qoris cusub ah oo otomaatig u ah geeddi-socodka qarinta xogta sirta ah ama sirta ah.
Isticmaalayaasha waxay qeexi karaan cayaaraha qoraalka ama muujinta caadiga ah iyaga oo galaya "Qalabyada" Aaladda otomaatiga ah ".
Waxyaabaha kale ee kor loogu qaadayo dhammaan codsiyada waxaa ka mid ah menus macno leh oo isku xiran oo leh xiriiriyeyaal 'hyperlinks' oo bixiya khibrad isdaba joog ah oo ku baahsan dhammaan barnaamijyada.
Sidee loo rakibaa LibreOffice 6.4 Debian, Ubuntu iyo derivatives?
Primero waa in aan marka hore uninstall nooca hore haddii aan u leeyihiin, Tani waa si looga fogaado dhibaatooyinka dambe, tan awgeed waa inaanu furnaa terminal oo aan fulino waxyaabaha soo socda:
Hadda waxaan u gudbi doonaa tag bogga rasmiga ah ee mashruuca halkaas oo qaybtaada soo dejinta aan awoodno hel xirmada deynta in lagu rakibo nidaamkayaga.
Sameeyay soo dejinta waxaan kala bixinaynaa nuxurka xirmada cusub ee la iibsaday:
Waxaan galnaa tusaha la abuuray ka dib furitaanka, kiiskeyga waa 64-bit:
Kadib waxaan tagnaa galka ay ku yaalliin faylalka LibreOffice:
Ugu dambeyntiina waxaan ku rakibeynaa:
Sidee loo rakibaa LibreOffice 6.4 Fedora, CentOS, openSUSE iyo derivatives?
Si waxaad isticmaaleysaa nidaam leh taageero lagu rakibo xirmooyinka rpm, Waad rakibi kartaa cusbooneysiintan cusub adoo ka helaya xirmada rpm bogga soo-dejinta LibreOffice.
Waxaan helnay xirmada aan fureyno:
Oo waxaan ku rakibnaa xirmooyinka galka ku jira:
Sidee loo rakibaa LibreOffice 6.4 Arch Linux, Manjaro iyo derivatives?
Marka laga hadlayo Arch iyo nidaamyadiisa la soo saaray Waan rakibi karnaa noocaan ah LibreOffice, waxaan kaliya furannaa terminal oo nooca:
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Aplicaciones » LibreOffice 6.4 durba waa lasii daayay wuxuuna ku faanaa waxqabad wanaagsan iyo inbadan
Galab wanaagsan qof walbo, waxaan kaaga tagayaa degelkan aan kula kulmay:
Uma maleynayo inay ka hadleyso nooca Linux gaar ahaan, laakiin waxay leedahay dhowr shey oo laga yaabo inay xiiso leeyihiin.
Janaayo 2020: Wanaagga, xumaanta iyo xiisaha Software-ka Bilaashka ah
Kormeeraha Codsiga Microsoft, waa il-baare falanqeeye il furan